Import Granite and Marble in Just Few Steps and Become Importer | Flodeal Inc မှ.
စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းတင်သွင်းခြင်းနှင့်ကျောက်သို့မဟုတ်မည်သည့်အခြားသဘာဝကျောက်ခေတ်အလွန်ကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးဆောက်လုပ်ရေးအတွက်သဘာဝကျောက်ခဲများအတွက်လိုအပ်ချက်များနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအစဉ်အမြဲရှိပါသည်. ဒါက-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင်ကအလွန်ကောင်းသော option ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်. သဘာဝကျောက်ခဲများတင်ပို့အများစုဟာအိန္ဒိယပြုသောအမှု, တရုတ်နိုင်ငံ, ဘရာဇီး, ကြက်ဆင် & အီတလီ. တရုတ်နှင့်ဘရာဇီးပို့ကုန်ကျောက်, တူရကီနဲ့အီတလီပြည်ပပို့ကုန်စကျင်ကျောက်, အိန္ဒိယစကျင်ကျောက်နှင့်ကျောက်နှစ်မျိုးလုံးတင်ပို့စဉ်.
သငျသညျပြီးသားသင်၏နိုင်ငံအတွင်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းများနှင့်ကျောက်တင်သွင်းခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအိန်ဒိယနိုငျငံကနေစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းများနှင့်ကျောက်၏အရေးပါမှုကိုသိကြရပါမည်. အိန္ဒိယကျောက်များနှင့်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းအရောင်များအလှတရားရှိတယ်, verity, ခိုင်မာခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းအလွန်အပြိုင်အဆိုင်များမှာ. အိန္ဒိယထက်ပိုမိုတင်ပို့ 100 သဘာဝကျောက်ခဲအမျိုးအစားများ. This includes Marble, နှမျးဖတျကြောကျ, သဲကျောက်, ထုံးကြောကျ, နှင့် Slatestone. အိန္ဒိယကျောက် နှင့် အိန္ဒိယစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြောင်း, လှပရှည်လျားသောရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မာတဲ့ပစ္စည်းများ, ကမ္ဘာအနှံ့လူကြိုက်များနေသော, သငျသညျအိန်ဒိယနိုငျငံကနေသဘာဝကျောက်ခဲတင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သစ်တစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်နိုင်ပါသည်.
အဆိုပါဒေသခံ Market ကနားလည်ခြင်း
ကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်. သင်သည်သင်၏ဧရိယာထဲမှာလူကြိုက်များကျောက်များနှင့်စကျင်ကျောက်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်သုတေသနလုပျနိုငျ. အဲဒီမှာကမ်ဘာပျေါတှငျစကျင်ကျောက်နှင့်ကျောက်၏ကျောက်မိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးချင်းစီကျောက်မိုင်းကျောက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအမျိုးအစားကိုထုတ်လုပ်. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာအများဆုံး salable ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်သောအရာသုတေသနတစ်နည်းနည်းလုပ်ပေး.
သင်တို့သည်လည်းမဆိုဒေသခံထည်သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူ့ကိုလူကြိုက်အများဆုံးပစ္စည်းများတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်. ယေဘုယျအားဖြင့်, သင်္ခါရဒါအနည်းငယ်ဒေသခံထည်သွားရောက်ခြင်းလည်းသင်တစ်ဦးအလားအလာသစ်ကိုဖောက်သည်ရဖို့ကူညီကြမည်ကိုတိုက်ရိုက်ကျောက်တင်သွင်းကြဘူး. အဆိုပါသင်္ခါရအနာဂတျတှငျသငျသညျအနေဖြင့်မဝယ်စေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်ကျောက်များနှင့်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းအနည်းငယ်ဒေသခံထည်သွားရောက်ကောင်းလှ၏. သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့စျေးကွက်၏ကွဲပြားခြားနားသောပေါ်ပြူလာအရောင်များကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးကျောက်များနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးစကျင်ကျောက်ဘလော့ဂ်များ browse နိုင်ပါတယ်.
ယခုတွင်သင်သည်လူကြိုက်များပစ္စည်းများကို၏စိတ်ကူးရှိသည်, ဒါဟာပထမဦးဆုံးတင်သွင်းရပါမည်သည့်ပစ္စည်းများကိုသိရှိနိုင်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့တဦးတည်းကွန်တိန်နာအတွင်းပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးဖော်စပ်ထားတဲ့အားသာချက်ပေး. You can select up to5materials in one container load. ကျနော်တို့ကကျောက်ခဲတို့ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ5ကွဲပြားခြားနားသောအဆောက်အ, ဒါကြောင့်သင်တဦးတည်းကွန်တိန်နာအတွင်း load နိုင်သည့်ပစ္စည်းများကြောင့်လက်မှတ်ထိုးဖို့မတိုင်မီကျွန်တော်တို့ကိုမမေးကျေးဇူးပြုပြီး.
အဆိုပါစကျင်ကျောက်နှင့်ကျောက်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိနိုင်ပါ, အဆိုပါအရွယ်အစားပြားနိုင်ပါတယ်, အုပ်ကြွပ်, အထိမ်းအမှတ်. လည်း, ထုတ်ကုန်ကွဲပြားခြားနားသောအထူအတွက်ရရှိနိုင်ပါ, ဒါကြောင့်အရောင်များကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့ပြီးနောက်သင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာအရွယ်အစားနဲ့အထူအပြီးသတ်ဖို့လိုတယ်. You can get an idea about the size and thickness from fabricators as well.
မိန့်ခင်မှာ, သငျသညျနိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးအရေအတွက်တဦးတည်းကွန်တိန်နာသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်နားလည်ရန်လိုအပ်. တစ်ယူနစ်စျေးနှုန်းအခမဲ့တွင်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ် အခြေခံ. တွက်ချက်. တစ်ယူနစ်စျေးနှုန်းဒေသခံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပါဝင်သည်, တင်နှင့်ထုပ်ပိုးစွဲချက်. ဒါကြောင့်နိမ့်ဆုံးအရေအတွက်စျေးနှုန်းအပေါ်တစ်ဦးရောင်ပြန်ဟပ်မှုရှိပါတယ်. သငျသညျတိကျတဲ့အရွယ်အစားများအတွက်လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးအရေအတွက်အဘို့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဆှေးနှေးနိုငျ, အထူ, နှင့်ပစ္စည်းများ.
သငျသညျအခမဲ့တွင်ဘုတ်အဖွဲ့အခြေခံပေါ်မှာပစ္စည်းလာပြီဖြစ်ကြောင်းကတည်းက, သင်သမုဒ္ဒရာနှင့်ဒေသခံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစွဲချက်ထွက်ရှာရန်လိုအပ်ပါတယ်. သင့်အနေဖြင့်သမုဒ္ဒရာကုန်တင်များအတွက်စွဲချက်ထွက်ရှာတွေ့မှမဆိုကြည်ကြည်ကုန်တင် forwarding ကိုအေဂျင်စီကသို့မဟုတ်ရေကြောင်းလိုင်းဆက်သွယ်နိုင်သည်. အချိန်အတောအတွင်း, သင်သည်သင်၏တိုင်းပြည်အတွင်းကုန်တင်စွဲချက်များနှင့်ထုံးစံရှင်းလင်းရေးစွဲချက်တွေအတွက်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်ပါတယ်.
သငျသညျသမုဒ်ဒရာကုန်တင်အပါအဝင်လူအပေါင်းတို့သည်စွဲချက်မျှတမှုနိုင်ပါတယ်, terminal ကိုစွဲချက်, ထုံးစံရှင်းလင်းရေးစွဲချက်, သင့်ရဲ့ stockyard နှင့်ဒေသခံအခွန်မရောက်မှီတိုင်အောင်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစွဲချက်. ဤသည်ကိုသင်ကွန်တိန်နာတင်သွင်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးတစ်ခုအားငါပေးမည်. သငျသညျအပေါငျးတို့သစွဲချက်တွက်ချက်ပြီးတာနဲ့, သွင်းကုန်၏ယူနစ်ကကိုဝေ. ဒါဟာအချို့ကိစ္စများတွင်စတုရန်းပေသို့မဟုတ်စတုရန်းမီတာသို့မဟုတ်ပင်ပိုငျးပိုငျးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာသင်ယူနစ်နှုန်းဆင်းသက်ကုန်ကျစရိတ်၏စိတ်ကူးတစ်ခုအားငါပေးမည်.
အခုဆိုရင်သင်နှင့်အတူတစ်ယူနစ်ဆင်းသက်ကုန်ကျစရိတ်များ. သင့်အနေဖြင့်အရောင်းရဆုံးစျေးကွက်စျေးနှုန်းများအတူကနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်. အဆိုပါအရောင်းရဆုံးစျေးကွက်စျေးနှုန်းများဆင်းသက်ကုန်ကျစရိတ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသူဖြစ်ရမည်.
သင့်အနေဖြင့်ဆင်းသက်ကုန်ကျစရိတ်လုံလောက်သောအနားသတ် add နိုင်ပါတယ်. အနိမ့်မာဂျင်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောအမြတ်စောင့်ရှောက်သောကုမ္ပဏီများမှလည်းရှိပါတယ်တဲ့သူကုမ္ပဏီများမှရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဈေးကွက်အတွက်လမ်းကြောင်းသစ်နှုန်းအတိုင်းရောင်းစျေးနှုန်းဆုံးဖြတ်. ဒါဟာစျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှုန်းကဲ့သို့ဖြစ်သင့်ပါတယ်.
ယခုအားဖြင့်, သင်လူကြိုက်များသောအရောင်များရှိ, အရွယ်အစား, ပစ္စည်း၏အထူနဲ့ဆင်းသက်ကုန်ကျစရိတ်. သငျသညျကျောသွင်းကုန်များ၏အမှန်တကယ်ဖြစ်စဉ်ကိုရနျလိုအပျ. ကျနော်တို့ပစ္စည်းများနှင့်အရေအတွက်နှုန်းအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောငွေပေးချေမှုအသုံးအနှုန်းများအပေါ်ရောင်းချရန်. အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအထွေထွေငွေပေးချေမှုအသုံးအနှုန်းများများမှာ:
ကြိုတင်မဲ + လက်ခံရရှိအပေါ်ပေးဆောင်
ကျနော်တို့ကိုလည်းကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအပေါ် မူတည်. စာရွက်စာတမ်းများဆန့်ကျင်ငွေအပေါ်ပစ္စည်းများကို.
ပစ္စည်းကနေငွေပေးချေအသုံးအနှုန်းမှအရာအားလုံးကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့ပြီးနောက်, သငျသညျအမိန့်နေရာနိုင်ပါတယ်. အမိန့်များပြီးစီးအရောင်များနှင့်ပမာဏအပေါ်မူတည်. ကျနော်တို့လုပ်လုံလောက်သောရင်းမြစ်များ 40-45 တစ်လလျှင်ကွန်တိန်နာ.
သင့်ရဲ့အမိန့်ကိုပြီးစီးခဲ့သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, သင်စစ်ဆေးခြင်းများအတွက်သွားနိုင်ပါတယ်. ရရှိနိုင်စစ်ဆေးရေး၏အောက်ပါမျိုးရှိပါတယ်
ပစ္စည်း၏အရည်အသွေးစစ်ဆေးနေပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏ရေကြောင်းအေးဂျင့်မှကွန်တိန်နာများအတွက်အမိန့်နိုင်ပါတယ်, သူတင်ပို့ဖို့အချည်းနှီးသောကွန်တိန်နာပေးနိုငျ. သင့်အနေဖြင့်ကုန်တင်နေ့မှ စ. ပွင့်လင်းထိပ်တန်းသို့မဟုတ် Box ကိုကွန်တိန်နာရနိုင်. သင်အမြဲကွဲပြားခြားနားသော provider များကိုအတူသမုဒ္ဒရာကုန်တင်များအတွက်စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းသင့်တယ်.
ထုပ်ပိုး Loading နှင့်စစ်ဆေးရေး
ထုပ်ပိုးမဆိုတင်ပို့သို့မဟုတ်သွင်းကုန်ပစ္စည်းအဟောင်းလက်ခံ၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Pack ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းအဖြစ်ပြု, သင့်ရဲ့ထုပ်ပိုးစံချိန်စံညွှန်းများကိုထုပ်ပိုးများ၏ရုပ်ပုံများကိုတောင်းကျေးဇူးပြုပြီး. ယေဘုယျအားဖြင့်, တင်ပို့သူတင်၏ရုပ်ပုံများကိုထောက်ပံ့ပေး. သဘာဝကျောက်များကြွပ်ဆတ်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်အဖြစ်ထုပ်ပိုးပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်သင့်, စနစ်တကျထုပ်ပိုးမပေးလျှင်သူတို့ကိုချိုးနိုင်.
သငျသညျအမိန့်အပြီးသတ်တစ်ချိန်ကသင်တို့ရှိသမျှသည်ရေကြောင်းညွှန်ကြားချက်ပေးသင့်. သင်အမြဲကွဲပြားခြားနားသောစာရွက်စာတမ်းများ၏မူကြမ်းတောင်းသင့်ပါတယ်အပြီးသတ်ဖို့ကြိုတင်. အဆိုပါမူကြမ်းအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအများကြီးကုန်ကျခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများတွင်မဆိုအမှားသင်အလွန်အကျွံကုန်ကျနိုင်ပါတယ်. ဤရွေ့ကားယေဘုယျစာရွက်စာတမ်းများများမှာ, သငျသညျစစျဆေးသငျ့သညျ :
မူလအစ၏လက်မှတ် (form ကိုတစ်ဦးက)
GSP စနစ် (ရွေးချယ်ထားသည့်နိုင်ငံများအတွက်)
သင်တို့သည်ဤစာရွက်စာတမ်းများ၏မူကြမ်းအရပြီးတာနဲ့, သင့်ရဲ့အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးအေးဂျင့်ကပြသ, နှင့်အပြောင်းအလဲအတွက်မဆိုသံသယတောင်းဆိုမှုကိုလည်းမရှိပါလျှင်.
အဆိုပါသင်္ဘောယူနိုင်ပါသည် 1 နေ့ 60 သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာပေါ် မူတည်. ရက်ပေါင်း, ယေဘုယျရေကြောင်းရက်ပေါင်းအောက်ပါကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ :
အရှေ့အာရှ –2ရန်နေ့ရက်များ 15 နေ့ရက်များ
သြစတြေးလျ – 20-28 နေ့ရက်များ
ဥရောပ – 25-35 နေ့ရက်များ
မြောက်အာဖရိက – 25-35 နေ့ရက်များ
အမေရိကတိုက် – 45-60 နေ့ရက်များ
အဆိုပါသမုဒ္ဒရာပို့ဆောင်ရေး port မှဆိပ်ကမ်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဖောက်သည်မှကျူးလွန်မတိုင်မီကြိုတင်၌သင်တို့၏ကုန်စည်ထောက်ပံ့သူနှင့်စစ်ဆေးကျေးဇူးပြုပြီး, နှင့်စောင့်ရှောက် 8-10 အပိုရက်ပေါင်း.
သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုစည်းကမ်းချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီးနောက်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သော Lading ၏ဘီလ်အဖြစ်အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများရနိုင်, GSP စနစ်, ငွေတောင်းခံလွှာစသည်တို့ကို, သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သင့်ဘဏ်အနေဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများရနိုင်. စာရွက်စာတမ်းများသင်တို့အလိုနှုန်းအဖြစ်ထားကြပါတယ်လျှင်စစ်ဆေးပါ.
သင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများရတဲ့ပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏အေးဂျင့်မှသူကပေးနိုင်ပါသည်. သင့်ရဲ့အေးဂျင့်သည်သင်၏အကောက်ခွန်၏လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များကိုသို့မဟုတ်အခြားအေဂျင်စီဖြည့်ဆည်းပြီးနောက်ကွန်တိန်နာလှတျမညျ.
သင့်ရဲ့ Stockyard အတွက်ပစ္စည်းလက်ခံခြင်း
စဉ်ဆက်မပြတ်နောက်ဆက်တွဲ-ups နှင့်ခြေရာခံ၏ဤမျှလောက်များစွာသောရက်အကြာမှာ, ယခုသင်သည်သင်၏ stockyard အတွက်ကွန်တိန်နာများ. ဒါကြောင့်ဖွင့်ပါနှင့်တင်နှင့်ထုပ်ပိုးသင့်လျော်လျှင်စစ်ဆေး. ကရြနှင့်တိုင်းတာနှင့်အခြားအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်းများအတွက်စစ်ဆေး. အခုဆိုရင်သင့်ဖောက်သည်ပစ္စည်းရောင်းနောက်တစ်နေ့အမိန့်အဘို့အပွငျဆငျနိုငျ.